Home Hindi, Warbixinada Maanta WAAO!!: Amir Khan Oo Bilaabay Inuu Helo Bilado Ka Baxsan Kuwa India Lagu Bixiyo ….
Amir Khan sida aan la socono waxaa uu wacdaro ka sameeyaa Box Office, waxaana uu jilaagaan marayaa inuu helo biladaha meel ka baxsan India , sababtoo ah waxaa uu keenay filimka Dangal oo noqday filim aan caadi ahayn.
Shirkada sameeysa qiimeeynta jilaayaasha ee qeybta China IMDb China ,ayaa Aamir Khan u aqoonsatay jilaaga ugu saameeynta badan China marka la fiiriyo jilaayaasha ajaaniibta ah ee ka shaqeeyaan halkaas.
Aktarkaan ayaa soo jiitay dad badan , waxaana uu mar walba muujiyaa inuu yahay jilaa u qalma heerka uu hadda ka marayo Box Office-ka, sidoo kale waa jilaa u baahan inuu ogaado heerka filimaantiisa ay gaarikaraan.
Aamir Khan waa jilaa hal filim sameeya sanadkii balse waxaa aflaantiisa laga daawadaa meelo badan iyo goobo kala duwan oo daafaha caalamka kamid ah , waana sababta uu kaga duwan yahay jilaayaasha kale.
Saameeynta ugu weyn ee uu sameeyey filim ahaan waa filimkii Dangal kaas oo China ka sameeyeey ganacsi aan caai ahayn , sidoo kale sheeko ahaan aad ayey ula dheceen dadka aad u daawada aflaanta Aamir Khan.
Aamir Khan sidoo kale filimaanta cajiibka ah ee lagu xasuusto waxaa kamid ah filimka 3 Idiots, PK and Dhoom 3 kuwaas oo dhamaantooda laga daawada China.
Dhanka kale waxaa la sheegay in suuqyada China ee dhanka aflaanta uu u furan yahay qof walba oo jilaa ah , balse Aamir Khan ayaa u badan.
Filimka Dangal waxaa uu noqday filimkii ugu horeeyey ee Aamir Khan sameeya kaas oo wacdaro ka sameeyey China, sababtoo ah waxaa uu si deg deg ah ku gaaray darajo aan caadi ahayn.